Shiina: Kulanka 3aad ee Xisbiga Shuuciga & wax ka-beddelka Dastuurka – Kasmo Newspaper
Shiina: Kulanka 3aad ee Xisbiga Shuuciga & wax ka-beddelka Dastuurka
Updated - February 25, 2018 3:27 pm GMT
London (Kasmo), Kulankii 3aad ee Xisbiga Shuuciga Shiinaha ayaa furmi doona maalinta Isniinta, 26ka Febraayo, kaas oo looga doodi doono isbeddellada muhiimka ah iyo shakhsiyaadka, ka hor isku dhaandhaynta Xukuumadda ee bisha soo socota.
Kulanka waxaa ka horreeyay mid maalintii Sabtida, 24kii Febraayo dhexmaray Xubnaha Golaha Dhexe ee Xisbiga iyo Madaxweyne Xi Jinping, waana midkii 3aad oo daba socda Kalfadhigii ‘XIX Congress’ ee Xisbiga oo qabsoomay 18-25 Oktoobar. Sida caadiga ah kulanka 3aad oo noocaan ah waxaa inta badan lagu lafaguraa isbeddellada dhaqaalaha iyo siyaasadda dalka.
Qodob kale oo shirkii Sabtida looga dooday wuxuu ku saabsanaa qeexidda shakhsiyaadka sida R/Wasaaraha, Wasiirrada iyo Agaasimeyaasha qaarkood oo Guddoomiyaha Bangiga Dhexe ku jiro.
Xilalkaas waxaa rasmi ahaan go’aamiya Barlamaanka oo u codeyn doona 5ta March, arrimahaas iyo xitaa sidii fikradaha hoggaamiye XI loogu soo dari lahaa Dastuurka, si looga dhigto qaar la soo xigto.
Golaha Dhexe ee Xisbigu wuxuu soo jeediyay in farqadda Dastuurka ee ka hadlaysa muddada xilka Madaxweynaha iyo Ku-xigeenkiisa, oo hadda 2 jeer oo min 5 sano ah, meesha laga saaro.
Xi Jinping oo 64 jir ah oo muddada 2aad ee xilka u bilaabatay Oktoobar, gabagabadii Kalfadhigii Xisbiga, rasmi ahaanna loo dooran doono 5ta March, waxaa laga yaabaa in uu muddo aan xad lahayn xafiiska sii joogo.